Izindaba - AMANZI NAMANZI VS WATER-REPELLENT VS WATERPROOF: YINI UHLUKO?
Sonke sibona izinkomba kumadivayisi angangeni manzi, amadivayisi angavimbi amanzi namadivayisi aphehla amanzi aphonswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi. Umbuzo omkhulu uthi: Uyini umehluko? Kunezindatshana eziningi ezibhalwe ngalesi sihloko, kepha sicabange ukuthi nathi sizophonsa amasenti ethu amabili futhi sibhekisise umehluko phakathi kwawo womathathu la magama, ngokugxila ngqo ezweni lamadivayisi.
Okokuqala, ake siqale ngezincazelo zesichazamazwi ezisheshayo zokungenwa ngamanzi, ukumelana namanzi, nokuxosha amanzi, njengoba kunikezwe yi-Oxford English Dictionary:
Ukumelana namanzi: uyakwazi ukumelana nokungena kwamanzi ngezinga elithile kepha hhayi ngokuphelele
Okuxosha amanzi: akungeneki kalula ngamanzi, ikakhulukazi njengomphumela wokwelashwa ngenhloso enjalo ngengubo engaphezulu
Ukungena manzi: ukungangenwa amanzi
Kusho ukuthini ukumelana namanzi?
Ukumelana namanzi yizinga eliphansi kakhulu lokuvikelwa kwamanzi kulaba abathathu. Uma ngabe into ibhalwe ukuthi ayizweli emanzini kusho ukuthi leyo divayisi uqobo ingakhiwa ngendlela yokuthi kube nzima kakhulu ukuthi amanzi angene ngaphakathi kuyo, noma mhlawumbe ukuthi ifakwe into elula kakhulu esiza ukuthuthukisa amathuba wedivayisi okusinda ekuhlangabezaneni namanzi. Ukumelana namanzi kuyinto oyibona ivamise ukwenzeka phakathi kwamawashi, okuyinika amandla okumelana nokugeza izandla okujwayelekile noma ishawa emvula elula.
Kusho Ukuthini Ukuxoshwa Kwamanzi?
Okuxosha amanzi ezinengilazi ngokuyisisekelo kuyisinyathelo nje esenyukeni kusuka ekuvalweni okungamelwa ngamanzi. Uma ngabe ithuluzi libhalwe ukuthi lingangeni amanzi empeleni linazo izakhiwo lapho, waqagela khona, ukuxosha amanzi kulo, ukwenze i-hydrophobic. Umshini oxosha amanzi unethuba eliphakeme kakhulu lokufakwa ngohlobo oluthile lwe-nanotechnology encane-yefilimu, kungaba ngaphakathi, ngaphandle, noma kokubili, futhi unethuba elingcono kakhulu lokuma emanzini kunedivayisi yakho ejwayelekile. Izinkampani eziningi zifuna ukuxoshwa kwamanzi, kepha leli gama liphikiswa kakhulu ngoba into yokuxosha amanzi eqinile ayivamile futhi ngenxa yayo yonke imibuzo nezinto ezingalindelekile ezihambisana nayo.
Kusho Ukuthini Ukungenwa Manzi?
Okungenamanzi Incazelo icacile, kepha umqondo wayo awuyona. Njengamanje, ayikho indinganiso esungulwe embonini ukuze idivayisi ihlukaniswe njengamanzi. Into eseduzane etholakalayo njengamanje, ngokuya ngesikali sokulinganisa, yifayela le- Isilinganiso sokuvikelwa kwe-Ingress isikali (noma i-IP Code). Lesi sikali sinikeza izinto isilinganiso kusuka ku-0-8 ngokuya ngokuthi isebenza kangakanani idivayisi evimbela amanzi ukungena kuwo, aka ukungena kwamanzi. Ngokusobala, kunephutha elilodwa elikhulu kulolu hlelo lokulinganisa: Kuthiwani ngezinkampani, njengathi lapha eHZO ezingakhathazeki ngokugcina amanzi ngaphandle kocingo ukuze ziwalondoloze ekulimaleni kwamanzi? Ukumboza kwethu kuvumela amanzi ngaphakathi kwamadivayisi, kepha okokufaka amanzi okungavikisi amadivayisi ngawo kubavikela kunoma yikuphi ukulimala kwamanzi. Lezi zinkampani zinikela ngensizakalo engahambisani nezinyathelo ezilinganiswa yi-IP, kepha isaphatha ukunikeza isisombululo kulawo makhasimende afuna ukuvikeleka ezintweni zemvelo kanye nasekufeni “kwendlu yangasese” esesabekayo
Ukusebenzisa igama elithi ukungenwa ngamanzi nakho kungabhekwa njengokuhamba okuyingozi ezinkampanini eziningi. Lokhu kungenxa yokuthi igama elingenamanzi livame ukudlulisa umqondo wokuthi lesi yisimo esingapheli, nokuthi noma yini 'evinjelwe ukungena kwamanzi' ayisoze yehluleka ngenxa yokuthintana namanzi – noma ngabe isimo sinjani.